Ahoana no hiatrehana ny vokatry ny fifandraisana misy poizina | Bezzia
Ahoana no hiatrehana ny vokatry ny fifandraisana misy poizina
Maria Jose Roldan | 09/06/2021 22:01 | Psychology
Mampalahelo fa manjary mazavava ny fifandraisana misy poizina ary tsy fahita firy io olona io izay tsy niaritra azy io indraindray teo amin'ny fiainana. Ity karazana fifandraisana ity dia mety hitranga ao amin'ny tontolon'ny fianakaviana, ny tena manokana na ny asa. Raha ny momba ny mpivady, ny fifandraisana misy poizina dia mahatonga ny fatorana nanjary nalemy ary mety tsy ho zaka ny toe-javatra.
Ny vokadratsy sy ny vokadratsin'ny fananana karazana fifandraisana dia tena matotra, indrindra mikasika ny lafiny ara-tsaina na ara-pientanam-po. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny vokatry ny fifandraisana misy poizina sy ny fomba hihoarana azy ireo isika.
1 Inona no vokatry ny fifandraisana misy poizina
2 Inona no hatao aorian'ny famaranana ny fifandraisana misy poizina
Inona no vokatry ny fifandraisana misy poizina
Ny fananana fifandraisana misy poizina amin'ny olona iray hafa dia ratsy ho an'ny mpivady ary ny vokany dia afaka maharitra mandritra ny fotoana na dia rava aza ny fifandraisana. Ny toe-tsaina sy fientanam-po amin'ny olona maro dia simba amin'ny fomba tena matotra sy matotra.
Amin'ny tranga maro, ny olona izay nijaly sy niaritra ny fifandraisana misy poizina dia mizaka ny vokany lehibe toy ny tebiteby, fahakiviana, na fahatokisan-tena. Ity karazana seza ity dia misy fiatraikany mivantana amin'ny toe-panahin'ilay olona. Raha toa ka tsy raisina araka ny tokony ho izy ireo seza ireo, ny olona mijaly amin'izy ireo dia mety hiteraka poizina izay manimba ny fifandraisana amin'ny ho avy miaraka amin'ny olon-kafa.
Ny zavatra voalohany tokony hataon'ny olona iray dia ny miaiky fa manana fifandraisana poizina izy ireo ary dia ilaina ny mamela ny fifandraisana toy izany haingana araka izay tratra. Na izany aza, ny dingana lehibe indrindra dia ny fiatrehana amin'ny fomba tsara amin'ny fahatsapana poizina sy fihetsem-po misy poizina.
Inona no hatao aorian'ny famaranana ny fifandraisana misy poizina
Raha miala amin'ny fifandraisana misy poizina dia tsara ny manaraka toro-hevitra maromaro izay manampy anao ho tsara kokoa amin'ny tenanao:
Miankina amin'ny faritry ny namanao akaiky indrindra sy ny fianakavianao.
Zava-dehibe ny mampihatra fisaintsainana na fialantsasatra sasantsasany hanampy anao hiala amin'ireo eritreritra ratsy rehetra ireo.
Soso-kevitra ny hanokana fotoana kely alohan'ny hidirana amina fifandraisana hafa.
Raha hitanao fa tsy tsara ny fihetsem-ponao, zava-dehibe ny fametrahana ny tenanao eo am-pelatanan'ny matihanina.
Tokony apetrakao ny fahatsapana ho meloka ary mijery tsara mialoha.
Tsara ny manandrana mahazo namana vaovao. hanampy anao hanadino ny fiainana taloha.
Farany, ny fitadiavana fifandraisana misy poizina ao amin'ny tsimok'aretina dia tsy asa mora ho an'ny rehetra. Na izany aza dia zava-dehibe ny fanaovana izany, satria efa hitanao ny vokany sy ny vokatr'io fanapoizinana io dia tena matotra. Matetika ny olona voakasik'izany dia miteraka fahatsapana ho meloka amin'ny zavatra nitranga tao anatin'ny fifandraisana. Ny fanomezan-tsiny ny tenanao amin'ny zava-drehetra dia tsy maintsy sorohina amin'ny fotoana rehetra satria amin'ny tenany ihany, io fahatsapana io dia endrika poizina iray hafa izay tsy maintsy esorina. Ny fitsaboana ny mety ho tohiny dia fanalahidy mba hahafahan'ny olona voakasik'izany hamerina ny fiainany indray ary afaka mankafy karazana fifandraisana salama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Ahoana no hiatrehana ny vokatry ny fifandraisana misy poizina